I-Old Fire Barn-iApartment eGqibeleleyo yaBucala - I-Airbnb
I-Old Fire Barn-iApartment eGqibeleleyo yaBucala
Isikhululo somlilo esidala ayisosakhiwo esasiyiyo kwiminyaka engama-60 eyadlulayo kodwa imvakalelo yembali ihleli. Lala kwaye uhlale apho iilori zakudala zisetyenziselwa ukubiza ikhaya. Uya kusebenzisa inqanaba elisezantsi lendlu yabucala enesango labucala.
Yonwabela isidlo sasemini sepikiniki epakini ngokujonga ichibi, elikwibhloko enye kude. Bona imuvi kwithiyetha yedolophu eyimbali. Yitya apho abantu balapha batyela khona kwaye badubule ichibi elibekwe kufutshane nekona. Yonwabele idolophu encinci, indawo ecothayo indlela yokuphila.
Indawo yokuhlala isetyenziselwa indawo yokucima umlilo edolophini. Ngaxa lithile umcimi-mlilo wayetyibilika ezantsi kwipali yobhedu aze angene kwindawo ngoku eyipaseji phakathi kwegumbi lokulala kunye nendawo yokutyela. Iifestile ezinkulu zebhayi apho kwakukho iingcango ezinkulu zegaraji. Umnyango wendlu ubekwe kwicala elijongene ne-private drive.
Ngomfanekiso-ngqondweni omncinci, unokuva ukukhala kweentsimbi zomlilo. Abanye baye bathi baziva kwaye babone ixesha elidlulileyo, kodwa abo bantu baye bathi balala kakhulu ebusuku besazi apho behlangene nemimoya yabaphenduli bokuqala.
ICrystal ayingomtsalane wabakhenkethi kodwa iyindawo yokuphumla. Hunker phantsi ukonwabele ubusika obunekhephu kwigumbi elifudumeleyo elipholileyo, imiboniso bhanyabhanya kunye nebar/cafe zingaphakathi kokuhamba umgama. Yiza ehlotyeni kwaye ujoyine iintaka zekhephu ukonwabela iipaki zedolophu kunye nechibi. Khetha iintyatyambo zasendle ezihamba koohola belizwe, yonwabele iintaka ezininzi ezintle okanye ujonge iinkwenkwezi zasebusuku. Abantu oya kudibana nabo iya kuba ngabo babiza ikhaya ledolophu.